Tranga amin’ny fampianarana :: Sekoly tsy miankina telo nahitana herisetra tamin’ny mpianatra • AoRaha
Tranga amin’ny fampianarana Sekoly tsy miankina telo nahitana herisetra tamin’ny mpianatra
Toeram-pianarana tsy miankina telo no voalaza fa nisehoana herisetra tamin’ny mpianatra, teto Antananarivo, raha ny fitarainana voarain’ny Ofisim-pirenena misahana ny sekoly tsy miankina na ny ONEP nandritra ny volana jona lasa teo. Anisan’ny tsy fanarahan-dalàna hataon’ireo mpampianatra ny fikapohana ireo mpianatra. Misy ihany koa ny fandroahana tsy ara-dalàna.
“Tranga iray niseho teny Ampitatafika ny fandroahan’ny talen-tsekoly mpianatra iray antenantenan’ny taom-pianarana noho ny tsy fifankahazoana eo amin’ity farany sy ireo ray aman-drenin’ ilay mpianatra. Heverina fa fampijaliana ilay zaza tsy manan-tsiny izany ka tsy maintsy nandraisana fepetra . Ankoatra ny fampitandremana dia nandoa ny saram-pianarana efa voaloan’ireo ray aman-dreny izy ireo”, hoy i Tsarasidy Marcellin, tale jeneralin’ny ONEP, ny alarobia lasa teo.
Tsy teto Antananarivo ihany fa ireo sekoly any amin’ny faritra hafa ihany koa dia nahenoana tsy fahatomombanana. Sekoly tsy
miankina roa, any Ambatondrazaka, no fantatra fa tsy manara-dalàna ka niharan’ny fanasaziana. “Tsy manana fahazoan-dalana hisokatra ilay sekoly sady tsy manaraka ny fenitra satria ratsy ny fotodrafitrasa ao aminy”, hoy ny fanampim-panazavan’ny tale jeneraly.
Ankoatra ny fanomezana fampitandremana an’ireo tompon’andraikitry ny sekoly dia fantatra fa mety hiafara amin’ny fanakatonana ny tsy fanajana ny fenitra efa mipetraka sy ny tontolo misy ny sekoly.
Notsindrian’i Tsarasidy Marcellin fa: “efa hiezaka amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana tsy miankina izy ireo na mety misy aza ny sakana tsy hahavitana izany”. “Misy ireo kaominina no manana sekoly tsy miankina maro nefa tsy manana fahefana hanaovana fitsidihana any ny tompon’andrai­kitra noho ny halaviran’ny toerana, toy ny any Antsakabary, any Befandriana Avaratra”, hoy indray izy.
Marihina fa manao fitsi­dihana ireo faritra maro eto amin’ny Nosy ity Ofisim-pirenena ity. Anisan’ny efa nanatanterahana izany ny tany Ambatondrazaka sy faritra hafa ivelan’Antananarivo. “Efa nisy ihany koa ny fandraisanay mpanara-maso ny fampianarana roa avy tamin’ireo andiany nivoaka farany. Hanofana sy hanoro lalana ireo mpampia­natra amin’ny lafiny pedagojia no hifantohan’izy ireo”, hoy ity tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny ONEP ity.